doro anya plastic uwe, doro anya nkwakọ akpa, okpokoro akịrịkọ nkwakọ
Klearfold ® nēdebe Clear Packaging System
Mgbe mmepụta mpịakọta adịghị ziri ezi na ulo oru mbo ke injection ịkpụzi ngwaọrụ, anyị patented Klearfold nēdebe doro anya nkwakọ usoro awade pụrụ iche bughi aghụghọ, yiri Insight, ma na-erughị na-eri. The Klearfold nēdebe doro anya nkwakọ usoro mejupụtara a doro anya plastic uwe ahụ na-e-igbachi ka a agụụ-kpụrụ tree ma ọ bụ doo anya plastic okpokoro akịrịkọ. Vac-trays na clamshells bụ ụgha na ha rubeere udi nke ngwaahịa na chọrọ cross-sectional ngwugwu profaịlụ.
Klearfold nēdebe awade mfe na oru oma n'aka-ndochi ... ngwaahịa na-kwajuru n'ime ndị vac-tree na sub-nzukọ slide n'ime doro anya plastic uwe. In-apịaji na taabụ na uwe-arụ a pụrụ iche Flange na vac-ụdị, kpochidoro abụọ mmiri na ntukwasi-obi ọnụ, na-enweghị mkpa maka fere fere akàrà ma ọ bụ ojiji nke Right Now, RF, ma ọ bụ okpomọkụ oru ngwá.
A isi mkpịsị aka-notch perforation na a n'akụkụ nke doro anya plastic uwe na-enye a pụrụ iche, mfe-oghere mma. Wepụ isi mkpịsị aka-notch nwekwara ewepu mkpọchi, ikwe ka tree na-adị mfe disengaged si doo anya uwe.
Watch Klearfold nēdebe Ngosi